CUDURKA BARADHADA: CALAAMADAHA, KA HORTAGGA IYO XAKAMAYNTA - BARADHADA
Hababka wax ka qabashada cudurrada baradhada
Beerta qaar ka mid ah, si looga hortago khasaarooyinka beeraha ee barafka, ayaa lagu beeray dalagyada xididada tiknoolajiyada cusub ee foostooyinka, bacaha iyo hoostaba. Laakiin ugu dhakhsaha badan waxay ku qanacsan yihiin in aanay kaydin tubada bakteeriyada, fungi iyo fayrasyada ka soo horjeeda cuduro kala duwan. Waxay si ba'an u garaacaan dhirta caafimaadka leh iyo midhooda beerta furan, aqalka dhirta lagu koriyo iyo xitaa mashaakilka. Dareemayaasha cudurada haweenka ayaa badanaa cayayaanka iyo cayayaanka kale. Aan u fiirsanno faahfaahin dheeraad ah, maxay yihiin cudurada baradho, iyo tallaabooyin lagula dagaallamo.
Waa muhiim! Waa wax aan suurtagal ahayn in si deg deg ah loo daaweeyo digriiga lagu beeray cudurada dabiiciga ah. Taasina waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in badi-ba-baastu ku dhacdo carrada ama abuurka. Natiijo ahaan, dagaalka ka dhanka ah iyaga waa inay ka bilaabmaan habka iyo daaweynta miraha, iyo sidoo kale diyaarinta si taxadar leh sariiraha beeritaanka.
Cudurada Baradho Ba'an
Cudurada bakteeriyada ee baradho waxaa ka dhalan kara microbes kala duwan, taas oo ka soo digriiga si tartiib tartiib ah ku faafinayaan afkoda, ku dhirta geedka oo dhan. Aad bay u adag tahay in lala dagaallamo iyaga, tan iyo ciidda ee dalagga dalagga uu korayo sidoo kale u baahan yahay jeermis.
Si aad ula qabsato hawlahaas oo kale, waxaad u baahan tahay inaad siisid wakhtigeedii iyo karti ahaaneed. Mararka qaarkood waxay qaadan doontaa sanado leh beeritaan kale oo ka mid ah aaladda cudurka leh ee ku jirta dalagyada udub dhexaadka u ah, sida: sarreen, galley, ari, dabocase, dabocase, kaabajka, tubaakada, digirta.
Roodhka bakteeriyada Brown
Cudurku wuxuu dhacaa sababtoo ah waxqabadka sheyga Ralstonia solanacearum on baradho. Jaantuska ugu horeeya waa la ogaan karaa inta lagu jiro xilliga ubax ee dalagga, marka xididdadu bilaabaan inay sameeyaan. Waqtigaan, waxaa jira hurdi iyo wilting caleenta, waxay noqotaa qallafsanaan iyo noolaan la'aan, iyo afkoda hoos u dhaco oo soo noqo brown leh waqti.
Ilaa heerkulka dhalmada ee bakteeriyada cudurada, jilcinta iyo geedi socodka qallajinta ayaa lagu xusay qaybta hoose ee asalka. Dhexdhexaadintu si fiican ayaa loo arkaa caleemaha, iyo xididdada cudurka qaba waxay noqdaan burcad qurux badan.
Haddii aad jarjaratid geedaha bukaanka ah, muraayadaha madow ee madow waxaa laga arki karaa giraanta giraanta. Marka la jarijiyo jeermiska noocan ah, grayish-white, xab xasaasi ah ayaa laga sii daayaa.
Botanistu waxay caleemaha bunni u qalantaa cudurada wadnaha ee bataatada iyo calaamad u ah dhimashada duurka si ay uga hortagaan xannibaadyada qulqulka by cufan cufan cufan. Waxaa jira xaalado marka cudurku uu muuqdo oo keliya isteerinka gaduudka iyo faleebada, taas oo aysan jirin kala qaybin caleemo ah oo ay ku jiraan dheecaanka xuubka.
Cudurku wuxuu ku jiraa digriiga baradho ah waxaa lagu muujiyaa jilibka dhiigga ee la jilicsan yahay iyo muuqaalka muuqaalka unugyada goosefactive ee geesaha. Badanaa geedi socodka suuska wuxuu ka bilaabmaa qashinka. Waxay la socdaan dheecaan xuubka iyo urta aan fiicnayn. Baradhada noocan oo kale ah waxay ku fidisaa dhammaan digriiga deriska ah iyo gebi ahaanba kallana.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay Hay'adda Maaliyadeed ee Caalamiga ah, ayaa reer Ukaaniya waxay qiyaastii ku dhawaad ​​4 milyan oo tan oo baradho ah sanadkiiba, halka celceliska cawska ah ee dalaggu uu yahay qiyaastii 18-19 milyan oo tan.
Faa'idooyinka falanqeeya ee dalka ayaa soo jiitay dareenka beeraleyda iyo mulkiilayaasha si ay xaqiiqda ah in dagaalka ka dhanka ah cudurrada bakteeriyada ee baradho waa in loogu talagalay ilaalinta dhamaystiran oo ka soo horjeeda jirooyinka kor lagu sharaxay. Qalabka tallaabooyinkaas oo dhan waa maareynta xiriirka ka dhaxeeya dadka gudaha iyo dibaddaba.
Tani waxay ka dhigan tahay in warshadu ay tahay in la ilaaliyo inta lagu jiro xilliga beerashada oo dhan habab kala duwan, oo ay ku jiraan wax soo saarka abuurka iyo nuucyada ururada iyo dhaqaalaha, iyo sidoo kale mabaadiida isku dhafka dalagyada.
Iyada oo muuqaalka kore ee kallana brown, wareegga dalagga iyo hordhaca ah ee Bacriminta optimal yihiin muhiimadda ugu muhiimsan ee la dagaallama. Waxaa suurtagal ah in lagu beero baradhada beerta cudurka qabta 5 sano kadib. Digriiga abuurka wuxuu u baahan yahay inuu si taxadar leh u rogo oo u hubso inuu kululeeyo ilaa 20 - 30 maalmood. Tani waxay gacan ka geysaneysaa in si sax ah loo ogaado waxyaabaha aan la isticmaali karin. Waxaa sidoo kale lagu qeexi doonaa qiyaas dhan 0.002% oo ah succinic acid, kaas oo loo isticmaalo in lagu soo saaro midhaha nus saac.
Haddii lagu jiro beerashada waxaa loo baahan yahay in la gooyo xididdada, mindi waa in loo geystaa in la nadiifiyo shaandhada ama kaneecada. Baradhada abuurka caafimaadka leh ee loogu talagalay ujeedooyinka qarsoon, waxaa lagu beeray ka hor intaan la beeriin kiimikada sida "TMTD", "Rizoplan", "Baktofit", "Polycarbotsin", oo ku celcelinaysa laba jeer daaweynta seedling ka hor inta aanad dhadhanin.
Hagaagsan oo noocyo kala duwan leh oo leh adkeysi sii kordhaysa ee microbes: "Khayraad", "Ulyanovsk", "Luck", "Volzhanka". Dagaalka ka dhanka ah cudurrada bakteeriyada ee baradho waxaa ka mid ah kormeer joogta ah ee goobta iyo saaridda dhirta buka.
Khabiiro waxay kugula talinayaan in ay sameeyaan nadiifinta koowaad ka dib markii afkoda u gaaro 25 cm ee height, labaad - inta lagu jiro ubax, iyo saddexaad - dhowr toddobaad ka hor goosashada. Waa muhiim inta lagu jiro mudadaas si aad si buuxda ugu dhejisid dhaladooda, si ay ciidda u hesho waqti si ay u qalalaan ka hor goosashada midhaha. Goosashada oo idil waa in la qalajiyaa kahor inta aan la dhigin Maqsin. Shaqo diyaarin ah ayaa looga baahan yahay bakhaarada.
Si loo dhammeeyo, waxay ka saaraan dhammaan khudradda iyo miraha sannadkii hore, jeermis ka dhigo 2% xalal aqueous of copper sulphate iyo darajada derbiyada leh lime slaked. Goobta albaabka laga soo galo waxay ku dul dhejineysaa naqshad 5% oo ah fitamiin buluug ah.
Waa muhiim! Badbaadinta ammaanka ee digriiga baradho ah ee maqaasiinka, 20ka maalmood ee ugu horeeya heerkulka qolka waa inaanay ka hooseeynin +13 ° C, qoyaanku waa inuu ahaado 90%. Mustaqbalka, waxaad u baahan tahay qaboojin tartiib tartiib ah ilaa 2 digrii.
Calaamadaha kalluunka faleebada ayaa aad loogu arki karaa digriiga iyo biomasska baradhada. Waxay u muuqdaan ka dib markii ubax ee foomka of huruud ah caleemaha khafiif ah iyo caleemaha caleenta. Shaybaarka uu waxyeeloobay way adag tahay in la qaado, xitaa dhimashada guud ee jirka. Tani waxay dhacdaa sababtoo ah burburinta qaabdhismeedka xididka dalagyada caleemaha iyo caleemaha.
Cudurku wuxuu ka billaabmayaa xididada, laakiin calaamadaha ugu horeeya waxaa laga arki karaa miraha kaliya marka la gooyo. Xaglaha huruudka ah ama madow ee cidhifyada muhiimka ahi waxay muujinayaan horumarin dheeri ah ee geeddi-socodka loo yaqaan "putrefactive processes" kaas oo ugu dambeyntii baabi'inaya ilmaha oo dhan. Marka la cadaadiyo, xab xasaasiga ah ayaa ka soo baxa meelaha ay dhibaatadu saameysey.
Haddii inta lagu jiro kormeerka miraha aadan u arag wax calaamado ah kallana iyo beeray dalagga asalka ah, cirifka, liidata, horumaray caleemaha leh caleemaha yar yar ee ka soo baxa ayaa kori doona. Ha ka filanin dalag weyn oo ka yimaada duurka.
Xaaladaha intooda badan, cudurrada bakteeriyada ee baradho waxaa sababa waxyaabo liita tayada beeraha, ama dhaawac mashiinka ah inta lagu jiro goosashada dalagyada xididka, gaadiidka digriiga ee weelasha cudurka qaba, iyo sidoo kale ku xadgudub xeerarka kaydinta. Maanta, ma jiraan kiimikooyin sun ah oo gaar ah oo ka yimaada cudurrada lafdhabarta ee dalagyada solanaceous.
Waxay la dagaallamayaan hababka karantiilka, taas oo marka lagu daro diyaarinta khibrad leh ee wax laga beerto iyo goosashada, waxaa ka mid ah sevosmenu muddo 3 sano ah, xulashada noocyo adkaysi u ah, bacriminta beeraha baradho leh daawooyinka potassium iyo ka saarida nidaamsan ee dhirta bukaanka calaamadaha ugu horreeya ee kallana.
Ma taqaanaa? Cudurka baradhadu wuxuu burburiyaa 30 ilaa 65% dalagga.
Cudurku wuxuu ku bilaabmaa asaaska digriiga iyo, inta badan, marxaladaha hore ee horumarinta waa ay adag tahay in la ogaado. Sababta asalka ah waa bakteeriyada ama cudurada fungal ee galaya dalagga xididka ah marka ay waxyeello farsamo ama ay ku qaadato cayayaanka. Iyadoo lagu saleynayo arrimahan, waxay caddaato sababta bataatadu ay si deg deg ah uga gudubtay gudaha.
Nidaamkan waxaa lagu qeexay jilicsanaanta digriiga iyo faafitaanka qallaf xoog leh. Unugyada wareegsan ayaa marka hore caddaan ah, ka dibna waxay soo jiidaan bunni, iyagoo soo qaadaya hooska mugdiga ah. Marka habka, dufku waxa uu saameeyaa marka gudaha uu gebi ahaanba jajab yahay. Waxay dhacdaa in dusha sare ee dalaggu uu daboolo qoyaanka madow, kaas oo ka yimaada walxaha dareeraha cadcad marka la shubo.
Haddii xididku uu ku dhaco xaalado qabow, indhuhu waa ay u dhintaan, geeddi-socodkuna wuxuu bilaabmaa. Sidaa darteed, digriiga waa in aan la daryeelin, waxaa wanaagsan in ay si dhakhso ah u isticmaalaan, haddii kale waxay ku dhufan doonaan dalagga oo dhan. Beeraleydu waxay xusuusataa in inta badan barafka uu saameeyo cudurkan miisaanka, gaar ahaan marka alaabta la barafeeyey, ama, si tartiib tartiib ah, ujirta xakabadda tuubada oo lagu badbaadiyey heerkul ka sarreeya + 4 ° C.
U muuqaalka kalluunka qoyan waxaa sidoo kale weheliya qoyaan badan qolka iyo hawo xumida. Tani waxay sabab u tahay la'aanta oksijiin, taas oo hoos u dhigta xasaasiyadda miraha baradhada. Waxaad ka takhalusi kartaa dhibaatada, mar kale, oo leh tallaabooyin adag. Tani, waxaa muhiim ah in la hubiyo in ciidda taas oo dhaqanka koraya uusan ahayn mid aad u qoyan oo si wanaagsan loo daboolay. Markaad ku kaydinaysid kaydka, dooro digriiga caafimaad leh oo si fiican u qalaji.
Waxaa lagu talinayaa in lagu daaweeyo baradhada abuurka ka hor inta aanad soo galin maqaasiinka, diyaarinta kiimikada "Maxim". Sidoo kale ilaali dalagga ka soo jeeda dhammaan noocyada abrasions iyo jarista, waqti, qaado tallaabooyin lagula dagaallamo cayayaanka. Xilliga qaboobaha, isku laab laabashooyinka, iyada oo aan loo eegin ujeedadooda, sanduuqyada ama shabakadaha khudradda. Xaaladaha aad ka heshay waraaqda qashinka ah, ka saar dhamaan dhamaan digriiga aag cudurka qaba oo isku day inaad u isticmaasho sida ugu dhakhsaha badan. Sidoo kale si adag u raac sharciyada kaydinta baradhada (kor ku xusan).
Ma taqaanaa? Sannad kasta, yurubiyanku wuxuu ku urursan yahay qiyaastii 35 tan oo baradho ah halkii hektar, halka dadka reer Ukrayna ah kaliya 15 tan. Kala duwanaanta noocan ahi waxay ka timaaddaa xaqiiqda ah in 95% waxsoosaarku uu ku beeranayo beero yaryar, taas, dabcan, ayaa ka muuqda tayada digriiga.
Kalluun gudaha isku dhafan
Cudurkan baradho baradho ah, sida noocyada hore ee bakteeriyada, waxay dhacdaa xilliga qaboobaha dalagyada xididku waa mid aan sax ahayn oo ay sabab u tahay farsamooyinka farsamada, saamaynta, jarista. Calaamadaha waxay ku xiran yihiin nooca jirrooyinka kudhaca maqaarka unugyada ee digriiga. Waxaad u eegi kartaa calaamadaha qoyan ama giraan iyo qallalan qallalan oo hore loo sharaxay. Boorsada cawl, midab ama bunal leh ayaa laga arki doonaa meelaha ay dhibaatadu saameysey.
Hababka lagu macaamilayo microbesyadaas ma aha wax ka duwan kuwa kor ku xusan. Howshaada ugu muhiimsan waa inaad ilaaliso dalagyada waxyeellada farsamada, si loo xaqiijiyo xaaladaha saxda ah ee kaydinta. Waxyaabaha abuurka ah ayaa muhiim u ah jeermiska ka hor inta aan la saarin wax kastoo kiimiko ah iyo kiimiko ah. Beerta xilliyaysan waxay kugula taliyaan daroogooyinka "Fludioksonil" iyo "Maxim".
Cudurkaan wuxuu kobcayaa natiijada soo saarista microbes ee Pectobacterium genus, kaas oo degi kara caws kala duwan oo dareemaya raaxo leh heerkulka laga bilaabo + 2 ° C ilaa + 32 ° C. Waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo abaalmarinta dulqaadka dulin, tan iyo markii ay soo galaan ciidda, waxaa lagu kaydiyaa muddo ka badan laba sano. Marka ugu horeysa, digriiga caafimaadka leh ayaa sumad u ah natiijada. Marxaladaha ugu horeeya waa wax aan macquul aheyn si loo ogaado aragti ahaan.
Cudurku wuxuu bilaabmaa inuu isu muujiyo sida ugu dhakhsaha badan xaaladaha wanaagsan ee yimaada: qoyaan korodhay ama cimilo kulul, kulul kulul. Dhibcaha, habka cudurka waa mid jilicsan oo noqda daba-dheer. Lugta madow waa mid la ogaan karo qaybaha dhulka hoostiisa iyo dhulka kor ku xusan ee barafka: qiiqa hoose hoos u jilicsan, caleemaha huruud noqdaan, geedku wuxuu si tartiib tartiib ah u lumayaa, iyo xididdadu waxay bilaabaan kallana.
Kulaylka, toddobaad ka dib, aagga asalka ah, jilicsan ee sprouts ayaa bilaabi doona, taas oo inta badan ku dhacdo miisaankiisa. Meelaha la isqaadsiiyay ayaa si sahal ah looga soo baxayaa, dheecaanka xuubka ayaa laga arki karaa qaybaha asalka. Digriiga waxay ka jajabaan goobaha stolonny, daboolay dhibco mugdi ah. Astaamaha dhabta ah ee cudurka ayaa ah dhibco yaryar oo baradho ah, maqaarka madow, dildilaaca kaas oo dareeraha qamriga la sii daayo. Dalagyada noocan oo kale ah waa mid aad u iftiimaya, taas oo muujinaysa burburka dhamaystiran ee ay ku hayaan bakteeriyada.
Waa suurtogal in laga adkaado lugta madow, si adag u ilaalin xeerarka beerista agrotechnik ee baradho, ururinta iyo kaydinta. Muuqaalkan, wareegga dalagga, beeritaanka tayada tayada, dabacsanaanta ciidda, faytowlka iyo xakamaynta cawska, jeermiska qalabka shaqada waa muhiim. Digriiga ka hor inta laga beerto, waa in la qaato daawooyinka sida "Maxim", "Prestige", "TMTD".
Waa muhiim! Si barandhada abuurka ah si fiican loo ilaaliyo ilaa guga, dayrta waxay u baahan tahay in la cagaarsho.
Cudurrada Cagaaran ee Fungal
Kooxdan cudurada baradhoowga ah ee cayayaanka ayaa sharraxaya sida ugu daran iyo khatarta. Muuqaalka ah ee fangaska kala duwan ee duurka ama in xididdada baradho si khasab ah u keeno jirro.
Waxaa badanaa loo dulqaadan karaa cayayaanka waxyeellada leh ama kicin kara xaalado aan habbooneyn oo loo sameeyo beerista dalagyada xididka. Tixgeli sifooyinka kooban ee cudurrada fungal ee ugu caansan iyo hababka loo maareynayo iyaga.
Dhirta oo sidoo kale u baahan daaweyn cudurada iyo cayayaanka: kaabajka, xididdo, yaanyada, qajaarka, bagalka, bocorka, dill, ukunta, karootada, strawberries, raspberries.
Guntinta caadiga ah
Cudurku wuxuu u muuqdaa natiijo ka dhalatay waxqabadyada muhiimka ah ee fungi shucaac ee Streptomycetes cirrid. Qalabyada ay dhacaan waa heerar hooseeya ee agrotechnology, nuurad, ciid, ciidda bacaadka leh iyo cimilada kulul. Wareegga illaa fiidkii wuxuu galay digriiga. Fawaakiinta cudurka qaba waxay luminayaan dhadhan iyo bandhigid. Baro yaryar oo caan ah ayaa ka muuqda barandhada, taas oo ugu dambeyntii ah "cork".
Marka la barbardhigo horumarinta qolofta, nabraha ayaa isku duwaya, iyo miraha cusub ee qoday miraha kelyaha waa wax yar oo la ogaan karo. Qorraxda si dhakhso ah ayuu u qalajiyaa oo lumiyaa sumaddeeda. Xuddunta ee dalagyada xididada noocan oo kale ah, inkastoo ay ka soo baxaan diirka boogta dibedda, ma beddelo. Tallaabooyin ka hortag ah oo daaweyn ah, Musharaxa sayniska cilmiga nafaqada, Professor NULiP ee Ukraine Ivan Markov ayaa ku taliyay in la ilaaliyo dalagga dalagga iyo xeerarka quudinta baradhada.
Sida laga soo xigtay saynisyahanka, digada cawska cusub, compost, xad dhaafka ah ee arrinta organic iyo Bacriminta-nitrogen-ka kooban wax ku biirinta horumarinta ee cudurada. Sidaa daraadeed, waxaa muhiim ah in la soo saaro walxaha kiimikada ee nafaqada leh iyadoo la xisaabinayo 60 kg halkii 1 ha, oo ah manganese sulfate iyo ammonium sulfate. Xasaasiyeyaasha nitrogen ayaa sidoo kale suurad wacan.
Waxyeellada qolofta ayaa si weyn hoos loogu dhigaa qiyaasta saxda ah ee cusbada potassium, chloride calcium, manganese, boron, copper, cobalt. Xisaabi lambarka loo baahan yahay ee kiimikada liis gareynaya si gaar ah wuxuu ku saleyn karaa sahaminta bacdamaa, kaas oo kaliya samayn kara dhakhtar takhasus leh.
Waa muhiim! Digada cagaaran iyo dushooda hadhuudhka ah ka dib goosashada waxay gacan ka geystaan ​​muuqaalka kalluunka.
Haddii aysan jirin fursad iyo habab loogu talagalay falanqaynta shaybaarka, waxaad isticmaali kartaa habka ugu jaban ee lagula dagaallamo qolofka, diiradda saaro noocyo baradho u adkaysta cudurka. Ha ka baqin cudurada fangas "Bozhedar", "Kosen 95", "Chernigov 98", "Lugovskaya", "Borodyanskaya Roza", "Vesta", "Symphony", "Vodogray", "Veloks", "Gatchinskaya", "Volovetskaya" , "Glow", "Lybid", "Drevlyanka", "Serpanok", "Poren", "Rosara" iyo noocyo kale oo leh maqaarka khafiifka ah ee lafaha casaanka.
Sidoo kale, milkiilaha dhul kasta waa inuu daryeelaa xaalada ciidda. Si aad u kobciso iyada oo leh waxyaabo waxtar leh, waxay macno u leedahay in ay abaabulaan xoqida barafka: Lupine, dhirta ama alfalfa. Waxaa la doortaa in la beero dalagyada tayada sare ee tayada sare leh ka hor intaan daahfurka lagu daaweynin "Maxim", "Prestige" diyaarinta iyo "Agat-25K". Ka dib markii ubbooyinku bilaabaan inay sameeyaan on geedo, waxaa lagama maarmaan ah in lagu waraabiyo ciidda 4 todobaad, ilaalinta qoyaanka ee 75%.
Qaybta budada ah
Nooca budada ah waa wakiilka keena Spongospora plasmodyomycete subterranea, oo loo yaqaan 'slimeevik' ama miro been ah. Waa buro boogo yaryar oo yaryar oo dhaqdhaqaaqa u horseedi kara oo horseedi kara jiritaan diimeed kharashka unugyada dhirta. Marka uu la socdo xaalado qallafsan, wuxuu ku dhuumanayaa lakab difaaca oo wuxuu isu beddelaa fangaska hurdada, kaas oo noqon kara ilaa 4 sano.
Xilliga qoyaanka, qolofta sare waxay ku dabooshaa xab, iyagoo u oggolaanaya duleelka inuu u guuro. Sidaa darteed wuxuu helo xididada iyo digriiga baradho. Shaybaarka jirrada ayaa noqda mid u nugul bakteeriyada iyo bakteeriyada jeermiska, iyo sidoo kale fayraska khatarta ah. Waxaa jira qolof budo ah oo lagu qaado infekshinka xididka, taas oo horseedaysa dhimasho iyo dhimasho ee afkoda.
Waxaa sidoo kale jira alaab cad oo ku yaal xididada iyo boogaha dufan ee diirka. Со временем язвочки на клубнях растрескиваются, образуя рельефность, а затем заполняются пороховой массой из спор паразитирующего грибка и останков тканевых оболочек. Фрагменты кожицы придают пустулам звездообразную форму. Во влажных и тяжелых грунтах, в пасмурную погоду, болезнь развивается интенсивнее.
Waa suurtogal in la badbaadiyo baradho ka soo slyshevik by macnaha dalagyada caadiga ah ee dalagga, by beerto abuurka tayo sare leh, kaas oo waa in la hor-daaweyn leh fungicides ("Maxim"). Dalagyada dalagyada asaasiga ah waa in lagu abaabulo cimilada qoyan, diirran, ilaalinta xeerarka kor ku xusan ee kaydinta iyo keydinta digriiga. Meelaha aadka u xanuunsan, dib-u-beeridda dhirta ayaa suurtagal ah kaliya 7 sano kadib.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay xogta Kormeeraha Guud ee Ilaalinta Xayawaanka ee Ukraine, 1996, dhammaan beeraha baradho ah ee dhulka guryaha iyo shirkadaha beeraha ee gobolka Lviv ayaa saameeyey qolofta. Waxay ahayd kor u kaca horumarinta xooggan ee fangaska. Xogta ugu dambeysa ee ku saabsan infekshanada digriiga 17 - 24%.
Guntin lacag ah
Cudurka waxaa sababa muuqaalka muuqaalka fayruuska Helminthosporium, kaas oo saameeya kaliya dareenka digriiga. Marxaladaha ugu horeeya, duleedka ayaa ah mid aan la qiyaasi karin, iyo sida miisaanku u faafo, maqaarka ayaa noqda midab madow. Dalagyada noocan oo kale ah waxay ugu horreyn ku xiran yihiin cudurrada faafa iyo cudurrada fayraska. Haddii miro qabay uu ku galo wax beerto, caleemaha jilicsan oo daciif ah ayaa kori doona.
Ka dib markii xilli sii kordhaya, kuwaas oo, kuwan, beergooyska sidoo kale waa suurto gal, laakiin waxay sii badan doontaa saameeya qolof. Fahmaan in fekerka sunta ah ee ku noolaa dalagga xididka, waxaad si deg deg ah u goosan kartaa goosashada, si taxadar leh u eegaya cilladaha baradho. Nadiifinta dhulka, waxaad arki kartaa dhibco cagaaran oo kala duwan.
Xilliga gu'ga, waxay muujinayaan qoob-ka-cayaaraha iyo boodhka lacag-galka ah, taas oo ah natiijada hawlaha adag ee firfircoonaanta unugyada iyo helitaanka ogsijiinta si loo xajiyo. Xaaladaha marka uu jiro infekshan weyn, qolofta sare ee miro ayaa si ba'an u burbursan, luminta qoyaanka.
Xaaladaha raaxada ee horumarinta qolofka lacagta ee barandhada waxaa loo tixgeliyaa qoyaan ee kaydinta iyo heerkul aad u sarreeya. Tusaale ahaan, abuuritaanka muran cudur, 1 saacadood at +15 C waa ku filan. At + 3 ° C, lama soo saaro boqoshaada.
Sidoo kale, waxaad xiiso u yeelan doontaa inaad ka ogaato fungicides oo kaa caawinaysa in aad iska saarto cudurada: "Ordan", "Trichodermin", "Abiga-Peak", "Titus", "Kvadris", "Skor", "Strobe".
Hababka lagu dagaalamayo dhaqdhaqaaqa lacag la'aanta ah, sida xaaladaha hore ee cudurada bakteeriyada iyo fungal. Waxay ka duwan yihiin marka laga reebo habka loogu talagalay jeermiska abuur baradho. Beeralayda waxay ku taliyeen in ay isticmaalaan daroogooyinka: "Vivatak 200", "Fundazol", "Maxim", "Bontan", "Titusim", "Nitrafen", "Tekto 45". Protravka waa in la sameeyaa isla markiiba ka dib marka la ururiyo xididada.
Dharka Dubka (Rhizoctoniosis)
Marka loo barbardhigo lacagaha iyo qolofta caadiga ah, rhizoctoniosis saameyn ma aha oo kaliya digriiga, laakiin geedka oo dhan. Cudurku wuxuu ka muuqdaa substrates infekshanka jirada, gaar ahaan xilliga qaboobaha. Kaxda madow ee buuggu way ka duwan tahay noocyada kale waxayna qaadaysaa halis weyn oo ah digriiga beeray dhul qabow.
Fallaha dhalinyarada ee dhaqamada buka ayaa aad u yar oo niyadjabsan. Dhibaatooyinka woqooyiga ee madow waxay muuqdaan khudaarta cagaaran, oo si sahlan u dillaacaan oo isku duway.
On the afkoda, cudurku waa la muujiyey nabarrada brown, kuwaas oo la daboolay leh dareemay dufan whitish ee qaybta hoose, iyo cirridka roogaga on xididada. Faafinta mass ee faafinta fungal si weyn u yareeyo beergooyska oo si buuxda u burburin Maqsin.
Horumarkeeda wuxuu ku kordhiyaa qabow iyo qoyan. Sidaa darteed, waayo for prophylaxis, ha degdegin si ay u beeri baradho, u oggolow ciidda si kululeeyo iyo qoyaan xad-dhaaf. Fadhi baarista xididdada abuurka, iska tuur saamiyada cudurka qaba.
Ka hor inta beerto, daaweynta digirta caafimaad leh "Fundazol", "Prestigem" ama "Maxim" waa muhiim. Isbedelka wakhtiga ku haboon ee dalagyada beerta, ka takhalusida dushooda geedka ka hor goosashada iyo harta dhirta ka dib, bacriminta ee ciidda si gaar ah leh arrin kulul oo xitaa arrimaha muhiimka ah.
Waa muhiim! Si kor loogu qaado dhalidda, 4 sano kasta, baradho waa in la cusbooneysiiyaa, siinaya doorbidaad caan ah, noocyo aan cudurka qabin ee xulashada Nederlandka.
Waxa kale oo muhiim ah in la yareeyo digriiga abuurka ka yar iftiinka qorraxda, maxaa yeelay dhirta muuqaalka mugdiga ah ayaa saameeya qolofka madow marka hore. Dhirta cirridka ah, beero-xoolo dhaqatada ayaa lagula talinayaa inay daaweeyaan daroogooyinka xooggan: "Ditan M-45", "Kolfugo", "Mancozeb", "Fenoram super."
Waa muhiim! Si loo badbaadiyo baradho caafimaad leh laga bilaabo karbaashka qolof madow, waxaa lagu talinayaa in la soo ururiyo goosashada hore ee miraha.
Alternaria (qallalan qallalan)
Baradho kale duwan oo ay sababto boqoshaada caleemaha Alternaria, kuwaas oo ku shaqeeya cimilada qallalan iyo kulul. Waxaad arki kartaa raadadka waxqabadkooda muddada ubax ee dhirta. Calaamadaha calaamadda ayaa horay loo soo sheegayaa ka hor goosashada dalagyada xididka. Cudurku wuxuu isu muujiyaa caleemaha, sprouts, dhif ah boqoshaada waxay kufilan karaan digriiga. Waa in lagugu soo wargeliyaa baro cawlan oo ah qaab wareegsan ama saddex xagal ah oo muuqda caleenta ama afkoda.
Mycelium si sahlan ayaa loo wareejiyaa caawinta dabaysha, oo ku dhalisa meelaha cusub ee beerta. Taas waxaa ku yaal khatarta cudurka Alternaria ee caleemaha baradhada. Waxay caddaynaysaa xaqiiqda maareynta farsamada ee khilaafka. Abuuritaankooda waxaa kordhay isbeddel joogto ah oo ku yimaada cimilada qoyan iyo qallalan, la'aanta qoyaan, xaaladaha xun ee ciidda, la'aanta potassium iyo nitrogen, iyo xad-dhaaf ah fosfooraska.
Midhaha yaryar waxay ku dhacaan fungus, oo ay la soo xiriiraan qashin, iyo kuwa qaangaarka ah haddii ay qabaan nabaro iyo dhaawac kale oo farsamo ah. Si loo baabi'iyo fangaska ka soo horjeeda qalitaanka qallalan, talaabada koowaad waa in la tirtiro ilaha hoose ee dhulka. Tani waxaa la sameeyaa dayrta dayrta. Sariiraha barafka ee mustaqbalka waa in lagu meeleeyo intii suurtagal ah oo ka imanaya yaanyada, sababtoo ah Alternaria halis u ah dhammaan nightshade.
Digriiga sayniska waa in si qumman loo baaraa, isagoo tuuraayo tijaabada maadada madow ama madow iyo meelo yar oo isku dhejis ah oo leh cidhiidhi ah oo aan cidhiidhi ahayn. Caleemaha caleemaha ayaa muhiim u ah bacriminta waqtiga. Isla marka aad aragto calaamadaha ugu horreeya ee cudurka, isla markiiba ku buufin dhirta leh fungicide kasta. Hawlaha soo noqnoqda ayaa lagula talinayaa in ay ku xiran tahay heerka infekshanka iyo tallaabada fog ee daroogada loo isticmaalo.
Nadiifinta waxaa si wanaagsan loo sameeyaa qabow iyo qoyan, waxay noqon kartaa cimilada roobka. Boqolkiiba beergooyinku waxay ku xiran yihiin xeerka goosashada iyo kaydinta miisaanka. Sida loo sameeyo si sax ah, waxaan hore u soo sheegnay kor.
Beerta qaar ka mid ah waxay la wadaagaan waayo-aragnimada beeritaanka noocyo u adkaysta cagaarshowga. Tusaale ahaan: "Lina", "Neva", "Victory", "Fairy Talale", "Reserve", "Lyubava", "Skoroplodnaya", "Volzhanka", "Master".
Ma taqaanaa? Beeralayda Isbaanishku waxay si diidmo ah u diideen in ay beeraan baradho oo keliya iyada oo xaqiiqda ah in xididada ay ka baqayaan dadkooda, kuwa isku midka ah, foomamka.
Tani waa cudur karantiilka fangas, taas oo ay keento microbes, sababtoo ah waxqabadka taas oo ah digriiga waxyeellada leh waa la mamnuucay in laga qaado meelaha ay korayaan. Pathogens waxay ku faaftaa xididada iyo nidaamka xididka geedka. Kansarka waxa uu muujiyaa kobcitaanka qaabdhismeedka qallafsan oo isku mid ah tuunbada.
Waqti ka dib, qaababkani waxay kordhiyaan, bedelaan midabada, u guuraan aagga asalka ah ee afkoda iyo dhagaxyada. Marxaladda ugu dambeeya ee horumarka, waxay noqdaan kuwo madow leh dusha sare ee dharka qulqulka ah. Gawaarida si fudud ayaa loo wareejiyaa miraha caafimaadka leh, gaar ahaan xilliyada jeer qoyaanka sare ee carrada. Waxay ku dhacaan dhulka iyagoo gacan ka helaya qalabka shaqada, xayawaanka iyo digada, waxay ku sii jiri karaan 4 sano.
Si aad uga takhalusto dhibaatada miro iyo dusha sare leh, ku shub kereosen, cadho ama foorno iyo meydka si aad u qoto dheer ugu yaraan 1 mitir. Beddel ahaan, bannaanka qaar ayaa bixiya in la gubo dhammaan dhirta ay saameeyeen, inkasta oo baradhada ka badbaaday aanay ku habboonayn abuurka, sababtoo ah waa foorarro suuragal ah oo ah jirooyinka. Digriigaas ayaa ugu wanaagsan loo isticmaalaa ujeedooyinka cuntada.
Si looga hortago faafidda fidida ee dhammaan berriga, waxaa lagu talinayaa in jeermiga ciidda lagu daro waraabiyo oo ay ku beeraan dalagyada hadhuudhka ah ama ku sii daadi goobta wax lagu qurxiyo. Muddo 5 sano ah, kansarrada baradhada waxay ka gudbaan noocyo u adkeysan kara, sida "Pavlinka", "Lvovskaya Belaya", "Baranovsky", "Iskra", "Zorka", "Early Yellow", "Smakny", "Spark", "Temp" , "Vilia".
Dabcan, iibinta waxyaallaha abuurka waxaa lagu sameeyaa si gaar ah xarumaha khaaska ah. Ka hor inta beerto, kormeer digriiga - dhulka hoostooda ilaa dusha sare waxay qarin karaan xanuunka kansarka. Nafaqada iyo macdanta macdanta ayaa waxay gacan ka geystaan ​​bixinta ciidda maadooyinka faafa. Laakiin isla waqtigaas, waxaa muhiim ah in la hubiyo in meeshii digada si fiican loo hayo. Hababka kantaroolka kansarka kiimikada ayaa la heli karaa oo keliya iyada oo la kormeerayo kormeeridda xayawaanka dhirta.
Waa muhiim! Ka hor inta aan beero, digriiga koray meelaha ay saameeyeen kansarka waxaa lagu nadiifin karaa iyada oo la isticmaalayo 1% hakin Fundazole.
Sababaha caleemaha qalalan waxay u muuqdaan inay yihiin baradho culus oo ku jira tiknoolajiyada beeraha iyo carrada aan fiicnayn, iyo sidoo kale dhaawaca farsamada iyo keydinta habboon ee digriiga xilliga jiilaalka. Symptomatology ee cudurku si cad u muuqda on digriiga foomka of dhibco dhalaalaya-madow, taas oo ugu dambeyntii u beddesho qoob-ka-yar yar. Maqaarka ku yaal aagagga ay dhibaatadu saameysey waa la jarjaray, lakabyo jilicsan oo la arki karo. Sawir la mid ah gudaha caloosha.
The duurka ee dhirta inta lagu guda jiro horumarinta Fusarium bilaabaan inay ka baxaan, hoos u dhigto afkoda iyo lumiyaan xooggooda. Haddii aad jarjartey boogaha bukaanka ah, waxaad arki kartaa garaac madow meeshii uu ka baxo.
Si loo baabi'iyo lafaha loo yaqaan "pathogenic fungi", waxaa lagula talinayaa inay si adag u raacaan xeerarka agrotechnology iyo kaydinta dalagga la goostay, warshad keliya oo tayo sare leh, ka ilaali baradhada shoogaha iyo jarista inta lagu jiro goosashada, iyo sanadkiiba mar hore dhoobada dharka qoryaha (sida, Maxim, Prestige).
Cudurka fungal ee baradho ah sida dabaylo goor dambe waxaa loo tixgeliyaa ugu liidata liiska dhammaan cudurada. Waxay saameeysaa geedka oo dhan gebi ahaanba, laakiin waxaa lagu soo bandhigaa caleenta caleenta inta lagu guda jiro guntinta duurka. Si aad u ogaatid muuqaalka muuqaalka ah ee dillaac waxay noqon kartaa dhibco dareeraha dareeraha ah ee lagu sameeyay on underside ee caleemaha iyo, sii kordhaya, dabooli geedka leh rooga brown joogto ah oo leh ubax yar yar. On the afkoda cudurka ku siin dhar dheer oo midab madow. Dhirta noocan oo kale ah ma awoodo inay si buuxda u kobciso, waxay bilaabataa habka waxyeellada.
Xaalado wanaagsan oo loogu talagalay dhacdooyinka dabayaaqadii dambe waa qoyaan badan kadib roobab daba dheeraaday, cimilo diiran oo aan lahayn hawo wanaagsan. Marka cimiladu soo kabato oo ciidda u dillaacdo, boqoshaada ayaa joojiya shaqaynta. Laakiin tani macnaheedu maahan inaad guul ka gaartay cudurka, maaddaama roobka ugu horreeya uu cudurku bilaabi doono inuu horumar sameeyo.
Si loo daaweeyo dhaqanka, marka laga reebo hababka dhaqameed, beerashada habboon iyo kaydinta dalagyada xididka, waa lagama maarmaan in calaamadaha bilowga ah ee dabaylo goor dambe, buufinta duurka u leh walxo boron, Oksikhom ama Polykhoy. Qaar ka mid ah dadka degaanka xagaaga si looga hortago macaamilka tiknoolajiyada caanka ah, lix jeer oo lagu daweeyo tincture caleenta toonta. Hawlgalkan billow bilowga ubax oo ku celi 14-kii maalmoodba mar.
Diyaarinta maadooyinka abuurka ayaa sidoo kale muhiim ah. Intaa waxaa dheer in ay soo baxaan oo ay yareynayaan dhammaan kuwa aan habooneyn, digriiga waa in lagu daaweeyaa Fitosprin, boric acid ama copper sulfate. Carrada ku jira meelaha faddareysan ee xilliga guga iyo dayrta, sidoo kale, waa la jaraa diyaar garowga kor ku xusan.
Ma taqaanaa? Qarnigii 17aad, Faransiiska ayaa soo bandhigay qaabka loo qurxiyo dharka iyo khiyaamooyinka leh bouquets ee ubax baradho. Wadankan, dhirta ayaa muddo dheer lagu beeray sida ornamental.
Foosto baradho ah
Pathogens fomoz waxay geli karaan xididdada afargeesada iyo baradhada qoyan, iyagoo saameyn ku leh iyaga. Calaamado muuqaal la'aan ah oo qallafsan, oo lagu daboolay dhibco madow.
Ilaa heerka horumarka, xayawaannada fangasku waxay isku garaacaan caleemaha, umana ogolaanayaan dhaqanka inay horumariyaan. Dhirta ay saameeyeen way ka duwan yihiin luminta maqaarka oo midabkeedu yahay midabka caleenta iyo daaq la'aanta. Haddii aadan qaadan wax tallaabooyin, dhirta way dhiman doontaa. Cagaarshowga beeraha, calaamadaha caloolxan ayaa lagu muujiyaa qaabka nabarada, oo ku faafay ilaa 6 cm. Waqti dheer, godad qoto dheer ayaa ka muuqda meelaha ay dhibaatadu saameysey. Shayadaas oo kale oo lagu keydiyo Maqsinka, waxay kor u qaadaan taranka mycelium. Waxay sidoo kale la socdaan hadhaaga ka dambeeya goosashada iyo haramaha ka baxsan beerta.
Waa wax aan suurtogal ahayn in la badbaadiyo baradhada cudurka qaba, laakiin waa lagama maarmaan in ay la dagaallanto dulinada beerta iyo abuurka. Tani, abuuritaanka karti leh abuurka leh dib u soo noqosho baradho oo kaliya 3 sano ka dib, xulasho xaraash ah ee digriiga caafimaad leh ee beerto iyo soo dhalaalaya qorraxda, iyo sidoo kale daaweynta preplant Fundazol waa muhiim.
Cudurka fayraska baradhada
Cudurada halista ah ee cudurada viral ee baradho waxay keenaan waxyeelo dalagga si tartiib tartiib ah, oo u ekaa bam waqtiga. Sannadaha ugu horeeya, hab-nololeedkoodu aad ayuu u hooseeyaa, laakiin mustaqbalka waxay burburinayaan ilaa 50% miraha. Lamaanadaha Colorado, aphids, cicadas iyo cayayaanka kale u dhaqmaan sida sidayaal cudurada sida. Iyo sidoo kale waa caabuq suurto gal ah ee processing ee dalagyada xididka. Aynu sii degganaanno cudurka ugu badan ee baradho ay sababaan fayrasyada.
Mosaic caadiga ah
Waxaa isku kicin kara dhowr fayras. Wixii shuruudaha wanaagsani waa shaqada iyo joogitaanka cayayaanka waxyeellada leh ee beerta. Waxay u muuqataa caleemo yaryar oo leh dhibco cagaaran oo muuqda oo cagaar ah oo ah qaab ashtako ah. Waqti ka dib, mooskuhu way madoobaan waxayna ku faafaan baadiyaha oo dhan.
Waa muhiim! Fayrasku ma qaadaan xidid beerta, haddii aad jeermiska beerta caanaha xoogga leh ama caanaha laga saaro. Xalka waxaa loo diyaariyaa marka loo eego 1 koob 10 litir oo biyo ah.
Muuqaal nadiif ah
Marka uu cudurku ku dhaco, caleemaha dhirta unugyada dhirta, samaynta nooc nooc ah. Waxay ka yimaadaan soo bixitaanka saboolka ah ee alaabta la kariyay. 3 sano ka dib beerashada bataatada cudurka qaba, waxaad ogaan doontaa sida dhirta loo dhalaalayo curyaanka leh qayb ka mid ah caleenta cagaarsho la'aanta ah oo aan fiicnayn. Karkinkani ma awoodo inuu xiro burooyinkeeda iyo siin miro. Waxa uu soo afjari doonaa xilli ciyaareedkiisa xilliga abaarta ka hor inta aan la gaarin tijaabada caafimaadka.
Muuqaal laga sameeyey
Munaasabada maskaxeed, qaababka dabeecadda waa madoallaha masagada, taas oo, ugu horreyntii, ka muuqato saxamada hoose iyo dhexe. Dabadeed, jilicsanka madow iyo lafdhabarta xididdada ayaa laga sameeyay meelaha ay dhibaatadu saameysey. Caleemaha si fudud ayaa u jajabaan, u dhakhsaha badan u dhintaan, inta badan lafdhabaxaan, iyadoo la fiiqayo astaamaha ka hor intaan la jarin. Iskudhufka jootiga ee khudaarta cagaaran.
Tuberotiin baradho ah
Cudurku wuxuu ku dhacaa fayraska Vertenoid sida fayraska (IUCS), kaas oo loola jeedo kaas oo loo yaqaan "verteblasti". Microbe waxyeellada leh ayaa lagu muujiyey isbedelka digriiga, ka sii daridda dhadhanka iyo bandhigga. Caleenta geedaha bukaanku waa mid aad u sarreeya, aad u yar, oo si khalad ah u kobcaya. Dhinacyada geesaha, caleemaha sida waxay leeyihiin hooska anthocyanin. Dhirta caanaha ayaa si liidata u koraan, lagana tago koritaanka, iyo midabka ayaa lumay on digriiga ee noocyo cas-cas. Isla mar ahaantaana, dalagyada xididka ah waxay ku koraan yar oo cabbirka leh foomka shinni-qaabeeya.
Ma taqaanaa? Fayrasyada PLPV iyo PVY ayaa loo aqoonsan yahay inay yihiin kuwa ugu khatarsan uguna faafaya fayruusyada, kuwaas oo yareeya miisaanka, tirada iyo gilgilidda digriiga, oo dila ilaa 80% dalagga.
Tuberotiin baradhooto ah
Horumarka necrosis ee barandhadu wuxuu bilaabmaa inuu ku dhaco ciidda iyo digriiga fayruska tubaakada (tubaakada tubaakada), taasoo hoos u dhigaysa nacnaca iyo keena necrosis miro. Astaamaha calaamadaha cudurka waa lafo yaryar oo daboolaya caleemaha, isbeddelka inflorescences, dhibco madow ah oo xididada ku jira, kuwaas oo inta badan ku dhajiya jilicsanaan, jilbaha ama gooyo.
Faa'idad aad u fara badan oo fayruuskan ah ayaa laga helaa goobaha bacaha ah iyo dhulalka. Maanta ma jiro daroogada cudurada viral ee baradho, taas oo isla markiiba xalin lahaa dhibaatada. Si kastaba ha ahaatee, si aan u lumin dhammaan dalagga, haddii mid ka mid ah fayraska cayayaanka ee liiska lagu ogaado, isla markiiba bilaab fay-nadiifinta, isaga oo dib u soo celiya muddadaa ilaa aad ka saarto dhirta ay saameysay.
Iska hubi in aanay jirin caws iyo kabriid beerta. Insecticides waxay ka caawisaa inay ka takhalusaan cayayaanka (Aktara, Aktellik, Bi-58 Cusub). Sidoo kale waa suurad wacan in la isticmaalo wax soo saarka tayada, oo laga tuuro digriiga leh sprouts filamentous.